Nzuzo - Toolsdecuisine.com
IHE NDỊ BỤ EZIOKWU
IHE 1 - Ozi NDỊ KWESỊRỊ KWESỊRỊ
Mgbe ị na-azụ ahịa na ụlọ ahịa anyị, dịka akụkụ nke usoro ịzụrụ na ireahịa, anyị na-anakọta ozi nkeonwe ị nyere anyị, dị ka aha, adreesị na adreesị ozi-e.
Mgbe ị na-agagharị ụlọ ahịa anyị, anyị na-anakwere adreesị Ịntanetị (Adreesị IP) nke kọmputa gị, nke na-enye anyị ohere inweta nkọwa ndị ọzọ banyere ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ ị na-eji.
Email Marketing (ma ọ bụrụ na ọdabara): Site na ikikere gị, anyị nwere ike iziga gị ozi ịntanetị banyere ụlọ ahịa anyị, ngwaahịa ọhụrụ na mmelite ndị ọzọ.
IHE 2 - MGBE
Kedu ka ị ga-esi nweta nkwenye m?
Mgbe ị na-enye anyị ozi nkeonwe iji mezue azụmahịa, lelee kaadị akwụmụgwọ gị, tinye usoro, nyefee nnyefe ma ọ bụ laghachi azụ, anyị chere na ị kwenyere anyị ịnakọta ozi gị na iji ya naanị njedebe a.
Ọ bụrụ na anyị arịọ gị ka ị nye gị ozi nkeonwe gị maka ihe ọ bụla ọzọ, maka ebumnuche ahịa dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ajụ gị maka nkwenye doro anya ma ọ bụ na anyị ga-enye gị ohere ịpụ.
Kedu ka m ga-esi kwanye nkwenye m?
Ọ bụrụ na mgbe anyị nyechara nkwenye gị, ị gbanwere uche gị ma gharakwa ịnakwere anyị ịkpọtụrụ gị, ịnakọta ozi gị ma ọ bụ ịkọwa ya, ị nwere ike ịkọrọ anyị site na ịkpọtụrụ anyị na toolsdecuisine@gmail.com ma ọ bụ site na mail na : Toolsdecuisine.com 22 New Street, VERNOU SUR BRENNE, 37210, France
IHE 3 - MGBE
Anyị nwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị ma ọ bụrụ na iwu achọrọ anyị ime ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị mebie Usoro anyị na Ọnọdụ nke Sale na Jiri.
IHE 4 - SHOPIFY
Ụlọ ahịa anyị na-akwado ụlọ ahịa na Shopify Inc. Ha na-enye anyị ụlọ ọrụ ịntanetị na e-commerce nke na-enye anyị ohere ịre gị ọrụ na ngwaahịa anyị.
A na-echekwa data gị na data nchekwa data nchekwa nke Shopify, nakwa na ngwa ahịa nke Shopify. A na-echekwa data gị na nchekwa echedoro site na firewall.
Ọ bụrụ na ị na-azụta zụọ ahịa site na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ego, mgbe ahụ Shopify ga-echekwa ozi kaadị akwụmụgwọ gị. A zoro ozi a dịka nkwekọrịta nche data nyere site na Ụlọ Ọrụ Ịkwụ Ụgwọ (PCI-DSS). A na-edebe ozi banyere azụmahịa ịzụrụ gị ruo ogologo oge dị mkpa iji mezue usoro gị. Ozugbo e mechara iwu gị, a ga-ehichapụ nkọwa nke azụmahịa azụmahịa.
Ọnụ ụzọ nkwụnye ụgwọ niile kwadoro na PCI-DSS, nke PCI Security Standards Board na-achịkwa ya, ọ bụkwa nsonaazụ nke ụlọ ọrụ dịka Visa, MasterCard, American Express, na Discover.
Ihe PCI-DSS chọrọ hụ na nhazi data nchekwa data site na ụlọ ahịa na ndị na-ahụ maka ọrụ.
IHE 5 - OZI NDỊ NDỊ ỌTỤRỤ ANYỊ NA - EME
N'ikpeazụ, ndị ọrụ atọ ndị anyị na-eji ga-anakọta, jiri ma gosipụta ozi gị ruo n'ókè dị mkpa iji rụọ ọrụ ha na-enye anyị.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-enye ọrụ nke atọ, dị ka ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ azụmahịa, nwere nkwupụta nzuzo nke onwe ha gbasara ozi anyị chọrọ iji nye ha maka azụmahịa ịzụ gị.
Maka ndị ọrụ a, anyị na-akwado ka ị gụọ iwu nzuzo ha nke ọma ka i wee ghọta otú ha ga-esi na-emeso ozi gbasara gị.
Ekwesiri icheta na enwere ike inye ndi ozo ma o bu ndi nwere akuku di iche iche karia gi ma obu nke anyi. Ya mere, ọ bụrụ na ị kpebie ịchụso azụmahịa nke chọrọ ọrụ nke onye na-eweta ndị ọzọ, ị nwere ike ịchịkwa ozi gị site na iwu nke ikike ebe onye ọrụ ahụ nọ ma ọ bụ nke ikike nke ụlọ ọrụ ya dị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na Canada na azụmahịa gị na-esite na ọnụ ụzọ nkwụnye ego nke United States, a pụrụ ịkọwa ozi ọma nke ejiri iji mezue azụmahịa ahụ n'okpuru iwu US. United States, gụnyere iwu Patriot.
Ozugbo ị na-ahapụ saịtị nke ụlọ ahịa anyị ma ọ bụ na-ebutegharị gaa na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa nke ndị ọzọ, enweghizi ike ịchịkwa gị na Nzuzo Nzuzo a ma ọ bụ General Conditions of Sale and Agreement. Ojiji nke weebụsaịtị anyi.
Ị nwere ike ịhapụ ebe nrụọrụ weebụ anyị site na ịpị ụfọdụ njikọ na saịtị anyị. Anyị ewereghị ọrụ maka ọrụ nzuzo nke saịtị ndị ọzọ ma kwado ka ị gụọ iwu nzuzo ha nke ọma.
IHE 6 - Ndozi
Iji chekwaa ozi nkeonwe gị, anyị ga-eji nlezianya na-agbaso omume kachasị mma ụlọ ọrụ iji hụ na ha anaghị efu, na-ezighi ezi, nweta, gosipụta, gbanwee, ma ọ bụ bibie ya n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị.
Ọ bụrụ na ị na-enye anyị nkọwa maka kaadị akwụmụgwọ gị, ha ga-ezoro ezo site na iji SSL nchebe SSL wee debe ya na ezoro ezo AES-256. Ọ bụ ezie na usoro ntinye ọ bụla n'Ịntanet ma ọ bụ nchekwa nchekwa na nchekwa na 100%, anyị na-agbaso ihe niile chọrọ PCI-DSS ma mezue ụkpụrụ ndị ọzọ na-ahụkarị site na ụlọ ọrụ.
AKWỤKWỌ ỤLỌ (AKA)
Nke a bụ ndepụta nke kuki anyị na-eji. Anyị edepụtara ha ebe a ka i wee nwee ohere ịhọrọ ma ị chọrọ ikwe ka ha ma ọ bụ.
_session_id, ihe nchọpụta pụrụ iche nke oge, na-enye ohere Shopify iji chekwaa ozi gbasara oge gị (onye ntinye aka, ọdịda peeji nke, wdg).
_shopify_visit, enweghị data echere, na-aga n'ihu maka 30 nkeji ebe ọ bụ na nleta ikpeazụ. Ihe nlekota ederede nchịkọta akụkọ nke onye na-ahụ maka ọrụ na-eme ihe na weebụsaịtị anyị iji dekọọ ọnụọgụ nleta.
_shopify_uniq, enweghị data echere, na-agwụ n'etiti etiti abalị (dabere na ebe onye ọbịa ahụ) n'echi ya. Na-agụta ọnụ ọgụgụ nke nleta na ụlọ ahịa maka otu onye ahịa.
ụgbọ ibu, ihe nchọpụta pụrụ iche, na-aga n'ihu maka izu 2, na-echekwa ozi banyere ụlọ ahịa ịzụ ahịa gị.
_secure_session_id, nchọpụta pụrụ iche nnọkọ
storefront_digest, ihe nchọpụta pụrụ iche, undefined ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa ahụ nwere paswọọdụ, eji ya ama ma ọ bụrụ na onye ọbịa ugbu a nwere ohere.
IHE 7 - AGE OF CONSENT
Site n'iji saịtị a, ị na-anọchi anya na ị dịkarịa ala ọgbọ nke ọtụtụ n'ime obodo ma ọ bụ ógbè nke obibi gị, nakwa na i nyewo anyị nnwere onwe gị iji mee ka nwatakịrị ọ bụla nwere ike iji ozi a. mkpokọta.
IHE 8 - IHANWEE NKWU NDỊ NDỊ NA-EKWU NDỊ
Anyị debere ikike iji gbanwee Nzuzo Nzuzo a n'oge ọ bụla, biko biko lelee ya ugboro ugboro. Mgbanwe na nkenke ga-emetụta ozugbo ị bipụtara na weebụsaịtị. Ọ bụrụ na anyị na-eme ka mgbanwe ndị dị na nke a iwu, anyị ga gwa gị ebe a na ọ na e emelitere, ya mere na ị maara ihe ọmụma anyị na-anakọta, otú anyị na-eji ya, na n'okpuru ihe ọnọdụ anyị igosipụta ya, s ' ọ dị mkpa ime ya.
Ọ bụrụ na ụlọ ahịa anyị na-enweta ma ọ bụ site na njikọta na ụlọ ọrụ ọzọ, a ga-ebufe ozi gị na ndị nwe ọhụrụ ka anyị wee nọgide na-ere gị ngwaahịa.
AJỤJỤ NA Kpọtụrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ: ịnweta, dozie, gbanwee ma ọ bụ hichapụ ozi ọ bụla anyị nwere maka gị, tinye akwụkwọ mkpesa, ma ọ bụ nanị chọrọ inweta ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka nri nri na tooletecuisine @ gmail. com ma ọ bụ site na mail na Outilsdecuisine.com
[Re: Onye Nlereanya Nzuzo]